Ihe ịma aka nke ndị nchọpụta na-eche ihu na afọ dijitalụ dị iche na nke ndị gara aga. Otú ọ dị, ndị na-eme nchọpụta nwere ike idozi nsogbu ndị a site n'ịdị na-eche echiche nke ọma na mbụ. Karịsịa, ekwenyere m na ụkpụrụ ndị e gosipụtara na akụkọ abụọ-Belmont Report (Belmont Report 1979) na Menlo Report (Dittrich, Kenneally, and others 2011) - nwere ike inyere ndị nchọpụta aka ịtụgharị uche banyere nsogbu ndị ha na-eche ihu. Dị ka m na-akọwa n'ụzọ zuru ezu na ihe ndekọ akụkọ ihe mere eme na isi nke a, akụkọ abụọ a bụ nyocha nke ọtụtụ afọ nke nyocha site na ndị ọkachamara nwere ọtụtụ ohere maka ntinye sitere na ndị dịgasị iche iche.
Nke mbụ, n'afọ 1974, ndị na-eme nnyocha-dịka akwụkwọ akụkọ Tuskegee Syphilis a ma ama bụ nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ narị narị anọ na ise ndị nchọpụta na-aghọgbu ndị America n'Africa, ma ghara ịnweta ọgwụgwọ dị mma ma dị irè maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 40 (lee ihe ndekọ akụkọ ihe mere eme) -Mgbe Congress US wepụtara ọrụ nke mba dị iche iche ịmepụta ụkpụrụ nduzi maka nchọpụta metụtara ụmụ mmadụ. Mgbe afọ anọ nke nzukọ na Belmont Conference Center, ìgwè ahụ mepụtara Belmont Report , akwụkwọ mpịakọta ma dị ike. The Belmont Report bụ ọgụgụ isi maka Iwu Ọchịchị , usoro nke ụkpụrụ na-achịkwa nnyocha ụmụ mmadụ na-enyocha ndị IRB na nkwado (Porter and Koski 2008) .
Mgbe ahụ, na 2010, na nzaghachi maka ọdịda dị mma nke ndị nchọpụta nchebe kọmputa na ihe isi ike nke itinye echiche ndị dị na Belmont Report maka nchọpụta dijitalụ, Gọọmentị US-kpọmkwem Ngalaba Nchebe nke Ụlọ-kere otu ọrụ-acha anụnụ anwụrụ mepụta ụkpụrụ nduzi na-eduzi maka nchọpụta metụtara ozi na teknụzụ nkwukọrịta (ICT). Ihe si na mgbalị a bụ Menlo Report (Dittrich, Kenneally, and others 2011) .
Mkpokọta Belmont Report na Report Menlo na-enye ụkpụrụ anọ nwere ike iduzi mkparịta ụka nke ndị na-eme nchọpụta: Ịkwanyere Ndị Mmadụ , Uru , Ikpe Ziri Ezi , na Ịkwanyere Iwu na Mmasị Ọha . Itinye ụkpụrụ anọ ndị a n'ọrụ na-adịghị adị mfe mgbe nile, ọ pụkwara ịchọ nkwekọrịta siri ike. Otú ọ dị, ụkpụrụ ndị ahụ na-enyere aka ịmepụta ahịa, kwadoro mmelite n'ime nchọpụta, ma mee ka ndị nchọpụta kọwaara ha ibe ha na ọha mmadụ ihe ha na-eche.